ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လက်ပံတောင်းတောင် ကြေနီးစီမံကိန်း လုံးဝဖျက်သိမ်းရေး ဆန္ဒပြ ဒေသခံတွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယာဉ်တန်း လမ်းမှာ တွေ့ဆုံ
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေနီးစီမံကိန်း လုံးဝဖျက်သိမ်းရေး ဆန္ဒပြ ဒေသခံတွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယာဉ်တန်း လမ်းမှာ တွေ့ဆုံ
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 10:13 PM
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း အခုချက်ချင်းတာရပ်လိုက်တာ ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။
တာဝန်ရှိသူ အချို့အတွက် မုံရွာက ကျောင်းသားလူငယ်
တွေ အသက်ပေးခဲ့ရတယ် ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့။ သူတို့ရဲ့
မမေ့ပါနဲ့ဗျ။ လက်ပံတောင်းတောင် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကော်
မရှင်က ပြောသွားတဲ့ အချက်တွေဟာ အဲဒီကျောင်းသားများ
အသက်ပေးလိုက်တာကို မလေးစားတဲ့ အပြင် မထီမဲ့မြင် ပြုနေသလိုပါပဲ။
ဒါလား နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာဆိုတာ အဒီ နိုင်ငံရေး ပရိရယ်ကြီးထဲမှာ အမှန်တရားဆိုတာ လုံးဝမရှိကြောင်း အခု လက်ပံတောင်းတောင်က သက်သေပြနေပါပြီ။ တဦးတယောက်ကို ကိုးကွယ်တဲ့
ခေတ်အခါဆိုတာ မြန်မာပြည် သူများအတွက် မရှိတော့ပါဘူး ။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ပဲ ...တခြားသူဟာလဲ တခြားသူပါပဲ နေထိုင်ကြီးပြင်လာပုံ ခြင်းလဲ မတူသလို ခံယူချက်ခြင်းလဲ မတူနိုင်ပါဘူး။ အားလုံး
စည်းလုံး ညီညွတ်ပြီး တက်ညီလက်ညီ တိုက်ပွဲဝင်မှသာ
ပြည်သူအတွက် အမှန်တကယ် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံနိုင်မဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ပေါ်ထွက်
လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေအထက်မှာ ငွေကြေးနဲ့
အာဏာတက်ထိုင်ထားတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ဥပဒေအရ
ခွင့်တောင်းပြီးမှတာ စီတန်းဆန ပြခွင့်ရှိမတဲ့လား ။ ကို့ကို တိုက်ခိုက်မဲ့
လက်နက်ကို ဘယ်ခရိုနီ ဘယ်စစ်အာဏာရှင်က တက်စင်ပေးမှာတဲ့လဲ ကြည့်ကောင်းအောင်လဲ ပြောပါအုံး ကော်မရှင် အကြီးအကဲ ကြီးရယ်...
မိမိအထင်အမြင်ကိုလွတ်လပ်စွာရေးသာနိုင်ပါတယ် မဆီမဆိုင် တွေ ရေးသားမိရင်သာ မိမိ ဦးဏှောက်ကို ဖေါက်ပြသလို ဖြစ်ပြီး အရှက်ရစရာသာ ရှိပါလိမ့်မယ်
မင်္ဂလာပါ - ကော်မရှင်
ဒေါ်စု ကားတန်းနဲ. ဆိံ္ထပြ ချီတက်လာတဲ့ ဒေသခံ ပြည်သူတွေဟာ လားရာ ဦးတည်ချက် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။ ကားတန်းက တောင်ဘက်ကိုသွားပြီး၊ ဒေသခံပြည်သူက မြောက်ဘက်ကို သွားနေသလိုဘဲ။
ဒီလို ဧရာမ ဘယ်သူမှမ၀င်ရဲတဲ့ ဖင်ကြားညုပ်မည့်
ကိစ္စကြီးကို ရှေည်ကြည်ပြီး မျှတစွာ ဖြေရှင်းသွားတဲ့
ခေါင်းခံရဲတဲ့ သတ္တိရှိတဲ့ အမေစုကို ချီးကျူးပါတယ်
We can see that Mom su doing good things for residentials' future. If this happen military never been handled like Mom Su. Military people always thinking to handle with guns as you know. You can imagine. She is graduated and well known person that can compare other country good leaders who have good hearted upon country people and country. They will not destroy. They are very responsible persons. Mom Su is one of them, she has this kind of quality. You should accept it.